Sida loo sameeyo liisaska M3U IPTV gudaha 【2022】 - FUDUD
Liiska M3U Spain
Liisaska Laatiinka IPTV
Liisaska kale ee M3U
Liisaska ku yaal Plex
Ka eeg Liisaska M3U ee VLC
Ka eeg liiska M3U ee Roku
Soo deji GB WhatsApp Delta APK
BlackMart APK Nooca ugu dambeeyay
Soo deji Deezer Premium MOD
Nooca ugu dambeeyay ee MX Player Pro
Soo deji Tinder Gold Mod APK
Isku xirka Arenavision
Liisaska ugu fiican M3U IPTV 2022
IPTV waa tignoolajiyada horumar badan samaysay tobankii sano ee la soo dhaafay, intii safarkan lagu jirayna wax badan ayay horumartay. Hadda ku dhawaad ​​goob kasta oo madadaalada qulqulka leh waxay isticmaashaa borotokoolkan si ay u abuurto liisaska M3U.
Haddii aadan weli aqoonin wax ku saabsan liiska IPTV iyo M3U, qoraalkan adigaa leh. Waxaad ogaan doontaa wax walba oo ku saabsan borotokoolkan si aad ugu raaxaysato fursadaha ay ina siiso madadaalada iyo sida loo abuuro liisaskayada M3U si aan ugu darno adeegayaashayada IPTV.
Maxaad ka baran doontaa halkan?
Waa maxay liiska M3U?
Waa maxay tignoolajiyada ay M3U isticmaasho si ay u shaqeyso?
Maxaa nuxur ah ayaa lagu raaxaysan karaa liiska M3U?
Sidee iyo halka laga soo dejiyo liisaska M3U?
Waa maxay IPTV?
Waa maxay liisaska kanaalka IPTV?
Farqiga u dhexeeya IPTV iyo Streaming
Sida loo abuuro liiska M3U IPTV oo leh barnaamijyo
Sida loo sameeyo liisaska M3U IPTV ee wata notepad iyo wax ka beddelka kanaalada
Maxaa ku jira liiska IPTV M3U ee Mexico?
Liiska IPTV - M3U Mexico
Liisaska M3U ee kanaalada Mexico
Liisaska filimada M3U ee Mexico
Liisaska ugu wanaagsan ee la cusboonaysiiyay iyo kuwa bilaashka ah ee M3U
Liisaska IPTV - M3U ee Spain iyo ciyaaraha
Liisaska IPTV - Laatiinka iyo adduunka M3U
Liisaska IPTV - M3U ee filimada iyo taxanaha
Sida loogu shubo liisaska M3U ee Qviart Combo V2
Soo dejinta kanaalka
Sida loogu rakibo liisaska M3U gudaha SS IPTV
Waa maxay sababta liiska SS IPTV uga soo saarayaa?
Liiska iptv-ga Latin
Whatsapp Delta version ugu dambeeyay
Qaabka M3U waa faylal fidsan nooca fidsan, kaas oo la furi karo laguna tafatiran karo tafatire kasta oo qoraal ah, tusaale ahaan, Windows notepad. M3U waa soo gaabinta "MPEG version 3.0 URL".
Faylka noocaan ah waxaa loo isticmaalaa in lagu abuuro ama lagu kaydiyo liisaska-ciyaaraha ama liiska-ciyaaraha.
Bilawgiisii ​​waxa kaliya oo taageeray Winamp, laakiin maanta waxa lagu taageeri karaa tiro badan oo ciyaartoy ahs, kaas oo ka dhigay halbeeg marka ay timaaddo samaynta liiska heesaha.
Waxa uu liiska M3U sameeyo waa in la caddeeyo meesha ay yaaliin dhammaan faylasha warbaahinta badan ee aan doonayno in aan ciyaarno. Taas awgeed, waxaa jira qaab qoraal oo gaar ah oo ay tahay inaan isticmaalno marka aan rabno inaan abuurno liisaskayada. Tan hoose ayaan ku baran doonaa.
Liisaska M3U waxay ka kooban yihiin ciwaanno shabakadeed taxane ah oo ahayd meesha fog ee nuxurka lagu raaxaysanayo, waxaad ku dari kartaa barnaamijyo qaali ah ama xitaa kanaalo buuxa meel kasta oo aduunka ah, iyada oo aan loo eegin hadday degaan, qaran iyo mid caalamiba yihiin.
Si uu liiska M3U u shaqeeyo, waa in lagu daraa ciyaartoyga warbaahinta taageera nooca faylka ah.. Waqtigan xaadirka ah, ku dhawaad ​​codsi kasta ama barnaamij kasta oo loogu talagalay inuu ku ciyaaro waxyaabaha ku jira warbaahinta badan ayaa awood u leh inuu u ciyaaro qaabka faylkan dhib la'aan.
Liisaska noocaan ah ayaa faa'iido u leh in si joogto ah loo cusbooneysiiyo meel fog.Sidan oo kale, kama welweli doono dhicitaanka URL-yada halkaasoo xogta ku jirta warbaahinta badan ee aan sida aadka ah u jecelnahay lagu hayo.
Liisaska ugu Fiican M3U ee IPTV gudaha Spain 2022
Liisaska Latino M3U ee ugu sarreeya 2022
Sida loo sameeyo Liisaska M3U ee Kodi
Sida loo arko liiska M3U ee Roku
Sida loogu daro liisaska M3U gudaha Plex
Sida loogu daro liisaska M3U gudaha OTTPlayer
Sida loo arko liiska M3U ee VLC
Liiska M3U waxa uu ka koobnaan karaa nooc kasta oo ka kooban oo aad qiyaasi karto. Inaad awood u yeelatid inaad hesho liisaska gaarka ah ee kanaalada kala duwan ama kanaalada gaarka ah ee gobol ama waddan.
Sidoo kale, waxaad ka heli kartaa ama ku kaydin kartaa filimaan, musalsalka iyo dukumentiyada afkaaga hooyo ama luqado kaleXataa qoraal-hoosaadyo ayaa lagu kaydin karaa mid kasta oo ka mid ah waxyaabahan.
Faylasha maxalliga ah sidoo kale waxaa lagu kaydin karaa iyada oo loo marayo liiska-ciyaaraha M3U, si aad u habayn karto habka ciyaarta, ka dibna aad ugu raaxaysato liiskaaga qalab kasta ama ciyaartoyga warbaahinta.
Liisaska M3U waxaan ku raaxaysan karnaa madadaalada qulqulka badan ee qalab kasta ama iyada oo loo marayo ciyaartoyga ka kooban warbaahinta badan. Marka xigta waxaan kuu sharixi doonaa meesha iyo sida aad u soo dejisan karto liisaska M3U.
IPTV waxay liis garaysaa Spain
Si aad u soo dejiso liiska M3U waa inaad marka hore aad tagtaa xidhiidhkan, ka dibna waxaad gelisaa username iyo password. Haddii aadan haysan, waxaad si fudud u abuuri kartaa adigoo raacaya badhanka "U hees" Ama waxaad isticmaali kartaa aaladaha Google, Facebook iyo Twitter si aad xitaa dhaqso ugu sameyso.
Marka aan galno bogga, waxaan aadeynaa barta raadinta oo ku qor magaca liiska aan dooneyno inaan raadinno. Aad bay muhiim u tahay inaad had iyo jeer dhigto horgalayaasha "IPTV" o "M3U" si mashiinka raadinta toos noogu qaado liisaska noocaan ah.
Si aad u hesho liisaska la cusboonaysiiyay tag sanduuqa oranaya "Ku haboon" oo dooro ikhtiyaarka "Taariikhda" ka dibna waxaad arki doontaa dhammaan liisaskii ugu dambeeyay, iyo inay suurtogal tahay inay si buuxda u shaqaynayaan.
Ugu dambeyntii waxaad dooraneysaa adigoo gujinaya liiska aad doorbideyso, oo sii wad inaad nuqul ka sameyso ciwaanka ka muuqda ciwaanka. Kani waa URL-ka aad ku koobi doonto arjigaaga IPTV ama qalabka warbaahinta badan ee aad isticmaalayso.
Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato barnaamijyada iyo ciyaartoyga ugu fiican ee IPTV ama liisaska M3U ee aad rakibi karto, hubi gelintayada kale si aad u doorato midka ku habboon baahiyahaaga.
Hadda, casharrada aan hadda sharraxnay waxay u shaqeysaa mid ka mid ah bogagga ugu caansan si loo helo liisaska M3U, laakiin kani maahan bogga keliya ee qaybtiisa. Liistada soo socotaa waxay kuu sharraxaysaa mareegaha kale si aad u heshid liiskaaga ugu fiican ee M3U.
stratustv: Waxay ku tusinaysaa liis taxane ah oo qaab M3U ah oo aad si fudud ugu dari karto una ciyaari karto. Liisaska waxaa lagu habeeyaa waddan iyo luqado kala duwan. Liis kastaa wuxuu leeyahay kanaalo kala duwan oo nuxur leh dhadhan kasta iyo da 'kasta.
ITVSSRC: Boggaan waxaad ka heli kartaa liisaska la cusbooneysiiyay maalin kasta. Waxay ku bixisaa liisaska M3U oo leh noocyo kala duwan oo ka kooban kanaalada, taxane iyo filimaan, marka lagu daro luqado badan iyo da 'kasta. Sidoo kale sida qiimaha lagu daray liis kasta waxaad ka heli kartaa kanaalada HD.
Way kugu habboon tahay: Runtii waa blog ka hadlaya mowduucyo kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, in soo socda isku xirka Waxaad si toos ah u aadi kartaa gelitaan ku tusinaysa liisaska M3U oo taxane ah oo la cusboonaysiiyay iyo inaad heli karto nooca nuxurka ay tahay, maadaama la dalbado.
Dhammaan APK: Blog-gani waxa uu leeyahay liisyo taxane ah oo la cusboonaysiiyay oo gebi ahaanba bilaash ah. Si aad u hesho guji Halkan.
Fluxus.TVMareegahaan waxaad ka heli kartaa liisaska aan dhamaadka lahayn oo qaab M3U ah oo diyaar u ah in dib loo daabaco khaladaad la'aan sababtoo ah mar walba waa la cusbooneysiiyaa. Nuxurku aad buu u kala duwan yahay oo waxaad ka heli kartaa taxane, filimaan iyo kanaalo da 'kasta iyo luqado kala duwan.
IPTV waxay u taagan tahay Internet Protocol Television, kaas oo Waa tignoolajiyad ka faa'iidaysata isticmaalka nidaamka IP-ga iyo intarneedka si ay ugu gudbiso waxyaabaha ku jira war-baahinta iyada oo loo marayo Streaming. Guud ahaan waxa loo istcimaalaa in lagu gudbiyo kanaalada, musalsalka iyo filimada shabakad ballaadhan.
Isticmaalka shabakad ballaadhan ayaa meesha ka saaraysa isticmaalka fiilooyinka iyo anteenada dhibsada. IPTV asal ahaan waa liis kanaalada lagu kala qaado khadka oo aan ka geli karno ku dhawaad ​​qalab kastaMaadaama liisaskan lagu shubi karo codsi kasta oo ka kooban warbaahinta badan.
Waxaa jira nooc ka mid ah liisaska ugu badan ee loo isticmaalo aaladaha IPTV, waa kuwa lagu sameeyay kordhinta M3U. Aynu markaa aragno waxay ku saabsan yihiin iyo sida aan u samayn karno liisaskayaga IPTV.
IPTV aad ayey caan u tahay iyada oo ay ugu wacan tahay xaqiiqda ah in aadan u baahnayn inaad shaqaaleysiiso hawl wadeen si aad ugu raaxaysato baahinta macluumaadka, tani waxay kaa xoraynaysaa kharashyo dheeri ah oo faa'iido u leh kaydinta dhaqaalaha. Haddii taas lagu guuldareysto, waxaad ku raaxaysan kartaa IPTV iyada oo loo marayo liiska IPTV ama M3U.
Liiska IPTV waxa loo isticmaalaa in lagu kaydiyo ciwaanada ama URL-yada kanaalada kala duwan ee ka shaqeeya IPTV laga galo shabakada. adoo isticmaalaya ciwaanada IP-ga fog
Liisaska IPTV ee aan inta badan ka helno intarneedka waxay ku yimaadaan qaab M3U, kaas oo ah qaab caalami ah oo cadaalad ah, oo la jaan qaadaya inta badan ciyaartoyga ka kooban warbaahinta badan, si kastaba ha ahaatee, waxaad ka heli kartaa liisaska IPTV ee qaabka M3U8 ama W3U.
Labada adeegga iyo IPTV iyo qulqulka labaduba waxay leeyihiin wax badan oo isku mid ah marka loo eego sifooyinka qaarkood, si kastaba ha ahaatee, waxaa jira kala duwanaansho qaarkood oo siinaya qiimo gaar ah mid kasta oo ka mid ah adeegyadan loogu talagalay madadaalada.
Farqiga ugu badan ee la xidhiidha ayaa ah in liiska IPTV uu isticmaalo shabakada gaarka ah, kaas oo doorbidaya wareegga xogta si degdeg ah oo xasilloon.. Dhanka kale, adeegyada daadihintu waxay gaadhaan isku shabakad furan, oo aan la maamulin sida iimaylka iyo daalacashada webka, taas oo ah, shabakad aan daacad ahayn.
Gaaban, baahinta adeegga telefishinka waxay u baahan tahay shuruudo xidhiidh sare leh, halka liiska IPTV uusan u baahnayn shuruudo badan, sidaas darteed waxaad ku raaxaysan kartaa waxa ku jira xawaarihiisa internetka oo aan aad u sarreyn.
Haddii aad rabto inaad samayso liiska M3U, waa inaad marka hore ogaataa inuu jiro qaab-dhismeed amar gaar ah oo ay tahay inaad xasuusato si aad u abuurto liis M3U IPTV ah oo si habboon u shaqaynaya.
Qaab dhismeedkani waa kan soo socda:
#EXTINF: (muddo), (sifooyin), (ciwaanka kanaalka)
Waxaan si faahfaahsan u faahfaahin doonaa waxa borotokool kastaa ka dhigan yahay:
# EXTM3U: Waa qasab in la dhigo kaliya bilowga qoraalka. Amarkani waxa uu u sheegayaa ciyaartoyga in liisku yahay qaabka la fidiyay ee M3U tanina waa sababta oo ah waxay leedahay sifooyin dheeraad ah oo gaar ah oo aan lagu gaadhin liiska aasaasiga ah ee M3U.
#EXTINF: Waa amarka tilmaamaya halka xogta badan ee dheeraadka ah ee Streaming kasta oo liiska ka bilaabmay. Amarkan waa in la isticmaalo mar kasta oo la rabo in aan ku darno kanaal, taas oo ah, haddii aan taxno toban channel, amarku waa inuu ka soo baxaa toban jeer channel kasta.
Waxa kale oo weheliya sifooyin gaar ah oo ka mid ah warbaahinta badan ee aan soo saari doono. Waxaa ka mid ah: muddada, sifooyinka iyo cinwaanka kanaalka.
Mid kasta oo iyaga ka mid ah waa in lagu kala saaraa meel bannaan. Aan aragno mid kasta oo ka mid ah sifooyinkaas loo isticmaalo.
Muddada: u dhiganta wakhtiga lagu qiyaasay ilbiriqsiyo ee faylka warbaahinta badan ee su'aasha. PLiistada IPTV kaliya laba halbeeg ayaa loo yaqaan, qiimaha eber (0) iyo qiimaha laga jaray hal (-1).
Guud ahaan waa in aan isticmaalno qiimaha -1 si aan u muujino ciyaaryahanka in mudada daawadu aysan ahayn mid go'an ama aan la go'aamin karin.
Sifooyinka: Waa macluumaad dheeri ah oo aan rabno inaan ku muujino ciyaaryahanka dhexdiisa. Xogtaasi waxay noqon kartaa hagaha barnaamijka, settings, logo channel, luqadaha iyo sifooyinka kale.si kastaba ha ahaatee tani waa ikhtiyaari.
Laynka ciwaanka kanaalka: tilmaamayaa magaca ka soo bixi doona ciyaaryahanka. Waa in ay ka horaysiisaa hakad (,) oo aan lahayn meel banaan ka dib hakadka.
URL: Halkan waxaan ku tusi doonaa URL ama ciwaanka shabakada halka kanaalka, taxanaha ama filimka aan rabno inaan ku darno liiska lagu hayo.
Sidoo kale, ciwaanka ama dariiqa loo maro halka lagu hayo faylka warbaahinta badan ee maxaliga ah ayaa halkan ku qoran, yacni, kan ku kaydsan kombayutarkeena.
Hadda oo aad tan ogtahay, Waxaan bilaabi karnaa abuurista liisaskayada heesaha oo qaab .m3u ah, iyo waxa ugu horreeya ee aan sameyn doono waa in aan furno tifaftiraha qoraalka si waafaqsan nidaamkayaga hawlgalka.
Waxa xiga ayaa noqon doona in aan bilowno ku darista macluumaadka isku xirka aan rabno in aan soo saarno iyada oo la raacayo hab-maamuuska amarka ee aan horay u soo sheegnay. Si loo xasuusto iyaga:
Xusuusnow in amarka ugu horreeya; yacni; # EXTM3U waa in lagu daraa hal mar oo keliya safka hore, waa inaan halkan lagu soo celin. Aynu eegno qaar ka mid ah tusaalooyinka amarradan:
#EXTINF:-1, Tusaalaha Filimka (2017)
#EXTINF:-1, Star Wars Qaybtii XNUMXaad
H: \_ PELICULAS \_ STAR WARS \_ Star Wars Qaybta 1999aad Khatarta Phantom (XNUMX) .mkv
Ugu dambeyntii, marka aan ku darno dhammaan ciwaannada kanaalada, musalsalka iyo filimada aan rabno inaan aragno, waa inaan sii wadnaa badbaadinta.
Faylka tab, waa inaad tagtaa "Save as" ikhtiyaarka. Marka uu soo baxo daaqada soo socota, waa inaad heshaa meesha aad ku kaydinayso faylka iyo qaybta magaca waa inaad gelisaa magaca aad siin doonto faylka. oo daruuri ku dar dhamaadka magaca kordhinta .m3u.
Haddii aadan macluumaadkan ku darin, markaas liisku awood uma yeelan doono in lagu daabaco codsiyada ama barnaamijyada meesha aad rabto inaad ku soo saarto liisaskan.
Hadda oo aad samaysay liiskaaga gaarka ah, waa inaad tagtaa si aad u geliso codsigaaga ama barnaamijka aad doorbidayso oo aad ku raaxaysato.
Haddii aadan weli garaneyn sida liiskaan loogu daro barnaamijyadan dib-u-celinta, waxaad booqan kartaa casharradayada halkaasoo aan ku sharraxi doono tallaabo-tallaabo sida loo dhejiyo liisaska M3U.
Waxaan horey u ognahay in liiska M3U uu ka kooban yahay walxo aad u kala duwan. Xaaladda liiska IPTV Mexico, waxaad ka heli kartaa dhammaan ciyaaraha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah, wararka, filimada iyo kanaalada dukumentiga ah..
Kanaalka qaarkood waxay noqon karaan:
Liisaska IPTV ama M3U waxaad ka heleysaa kanaalo dalal kala duwan iyo luqado kala duwan mana aha waxa aad raadineyso.
Markaa, haddii aad joogto Mexico oo aad rabto inaad hesho liisaska kanaalada iyo filimada Mexico, waxaanu kaa tagnay liis weyn oo kaa caawin doona inaad hesho madadaalada ugu fiican:
Hadda oo aanu rakibnay barnaamij taageera faylalka M3U, waxaanu kaliya diirada saari karnaa helista liisaska ugu fiican ee M3U ee la casriyeeyay oo 100% bilaash ah.
Inkastoo mararka qaarkood aysan aad u sahlanayn in la helo liisaskan, annagu Waanu ku raadinay ka dibna waxa aanu kuu dhaafnay liisaska ugu fiican ee M3U kuwaas oo meel fog laga cusboonaysiiyay oo gelistooduna tahay mid bilaash ah.
Qviart Combo V2 waa satalayt dhijitaal ah iyo TTDHD decoder ama qaataha, kaas oo sidoo kale haysta taageerada caadiga ah ee DVB-T2 iyo DVB-S2. Waxaa lagu sii daayaa xasilloon oo waxay sahlaysa in wax lagu duubo mid ka mid ah labada dekedood ee USB, sidoo kale waxay leedahay Ciyaartoyga Warbaahinta leh tayada muuqaal aan caadi ahayn sababtoo ah qeexitaankiisa 1080p FullHD.
Si aad ugu raaxaysato madadaalada, waa inaad ku rakibtaa kanaalada aad jeceshahay waxaana halkan ah laba ikhtiyaar, liisaska iyo kanaalka:
Marka hore diyaari liiska kanaalka, ka dib:
Geli pendrive-gaaga kanaalada oo dooro ikhtiyaarka USB.
Dooro badhanka jaalaha ah ee oranaya "Soo rar xogta".
Qalabku wuxuu ku waydiin doonaa qaab su'aal ah "¿Kor", oo aad ugu jawaabto in"SI".
Waqtiga la "Download liiska", oo furaya faylka.
Markaad geliso pendrive-ka furaha furaha, waxaad ka sii socotaa kanaalka 1 Menu> Balaadhinta> Menu USB.
Waxaad doorataa liiska.
Waxay ku weydiin doontaa inaad xaqiijiso"Si loo cusbooneysiiyo?"
Dhowr ilbiriqsi ka dib waxaad awoodi doontaa inaad ka baxdo menu-ka, oo aad ka damiso qalabka kontoroolka fog ka dibna jir ahaan batoonka dansan.
Markaad dib u bilowdo hal daqiiqo ka dib, liiska M3U waa in mar hore lagu shubaa Qviart Combo V2.
NotaHaddii ay dhacdo in aan la cusboonaysiin, waa inaad hubisaa qaabeynta shabakadda. Hadii aad channel ka hadhayna, waxaad raaci kartaa talaabooyinkan soo socda.
Talaabada ugu horeysa waa inaad gasho ikhtiyaarka IPTV.
Kadib waxaad arki doontaa shaashadda soo socota:
Kadib dooro ikhtiyaarka casaanka ah ee dhahaya "Kudar"Si aad ugu darto kanaal cusub.
Furaha furaha ah wuxuu ahaan doonaa 0000, geli oo sii wad:
Waxaad ku geli kartaa kanaalka dhowr siyaabood:
URL sawirka: Adoo dooranaya falaarta saxda ah ee amarka, waxaad geli kartaa URL oo leh sawir noqon doona astaanta kanaalka.
URL-ka fiidiyowga: Ikhtiyaar kale oo aad arki doonto markaad gujiso falaarta saxda ah waa inaad geliso URL kanaalka la doortay ee IPTV.
Calanka dadka waaweyn: kanaalka dadka waaweyn.
Kadib markaad geliso URL-ka kanaalka oo aad doorato OK, bilow inaad geliso kanaalka.
Kanaal kastaa wuxuu ku shubaa ilaa 45 sekan.
Dhamaadka gelitaan kasta, bogga guriga ayaa muujin doona foorno. Tani waa halka aad ku aragto saameynta ay keentay gelinta sawirada kanaalada. Haddii aynaan ku darin sawirro waxay u ekaan doontaa sidan:
6. Si aad sawirada ugu darto, kaliya dooro badhanka buluuga ah ee oranaya "Isbedel".
Tallaabooyinkan fudud waxaad ku dari kartaa kanaalada aad doorbidayso Qviart Combo V2.
Waxaan kugula talineynaa inaad raacdo tallaabo-tallaabo si aad u rakibto Liiska M3U ee SS IPTV:
Tag arjiga SSIPTV on your Smart TV.
Sanduuqa wada hadalka ee soo socda ayaa furmi doona:
3.Dooro goobaha, sida falaarta tilmaamaysa:
Shaashada soo socota ayaa soo bixi doonta:
Marka xigta waa inaad abuurtaa koodka xidhiidhka Dooro ikhtiyaarka Hel lambar (Falaarta 1), oo kood alfanumeric ah ayaa la samayn doonaa oo ay tahay inaad koobiyayso (Falaarta 2).
Hadda tag bogga rasmiga ah ee SSIPTV ka biraawsarkaaga adigoo gujinaya aquí.
Waxaad arki doontaa shaashadda soo socota
Dhig code meesha uu ku qoran yahay Geli Koodhka Xiriirinta (Falaarta 1 ee sawirka xigta).
Xullo QALABKA KU DAR (Falaarta 2).
Boggani wuxuu furmi doonaa halka ay tahay inaad hesho meesha ay ku qoran tahay Liiska ciyaaraha dibadda oo dooro gudaha KU dar ITEM.
Daaqada pop-up ayaa furmi doonta
Tan waa inaad gelisaa xogta soo socota:
Magaca la muujiyay: Liiska magaca Tusaale ahaan: Liiskayga M3U
Source: URL liiska M3U ee aad rabto in aad soo geliyaan.
Daaqada pop-up ayaa xirmi doonta, shaashadduna waxay ahaan doontaa meesha aad ku kaydinayso xogta la galiyay, adigoo dooranaya ikhtiyaarka
Horeba codsigaaga SmartTV waa inaad cusboonaysiisaa macluumaadka, adoo dooranaya astaanta dib u dejiso dhanka midig ee sare ee liiska:
Hadda wixii ka dambeeya waxaad ka arki kartaa dhammaan kanaalada isku xirkaaga.
La sameeyay si guul leh ayaa loo rakibay Liiskaaga M3U ee SS IPTV.
Si aad u awooddo in la sameeyo nidaam shakhsiyeed oo taran, iyo in la tirtiro faylasha aan loo baahnayn, ama lagu daro kuwa cusub. Sidaas ayaad naftaada uga badbaadisaa dhibka aad ugu dari karto si gaar ah.
Liis kasta waa in lagu soo dejiyaa aaladda ama ugu yaraan waa in lagu kaydiyaa "Akoonkayga", haddii loo isticmaalo ForkPlayer ee Smart-TV.
Sida qoraal muhiim ah in la xuso, haddii aad rabto in aad dhegeysato music, oo aad leedahay internet wanaagsan, uma baahnid in aad kaydiso playlist ah. Waxay ku filnaan doontaa oo kaliya in lagu shubo ciyaaryahanka, aaladda gacanta ama PC.
Ha iloobin inaad booqato:
Inta badan la doonayay
Soo deji noocii ugu dambeeyay ee WhatsApp Plus (AntiBan) APK
Soo deji Videoder Premium Apk 2022
Soo deji nooca ugu dambeeyay ee YouTube Music Premium APK
Liisaska IPTV ee dadka waaweyn ee bilaashka ah (la cusboonaysiiyay 2022)
Liiska Ciyaartoyda Ticky
Sida loo arko liiska IPTV ee Kodi?
© 2022 MtresU • Lagu abuuray GeneratePress